लेख/रचना पारसले उठाए र अर्काकी पत्नी ? �उदय भट्ट जनयुद्धबाट शान्तिप्रक्रिया हु�दै संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न हु�दासम्म मान्छेहरू अनुमान गर्थे �अव माओवादीले २० वर्ष देश चलाउ�छ । पुष्पकमल दाहालले सरकार चलाएको दुई महिना नपुग्दै पार्टीभित्र र बाहिरको जनआक्रोशले सीमा नाघ्यो । खरिपाटी भेलामा त्यसको प्रस्फुटन भयो । रक्मांगद कटवाल प्रकरण त संकटमोचन (सेफल्यान्डिङ)का लागि दाहालद्वारा रचित एउटा फूलबुट्टे पटकथा मात्र थियो । त्यसयता तत्कालीन माओवादी देखिनेगरी ३ टुक्रामा विभाजित छ र अन्य दर्जनौ� गुट�उपगुट, समूह�उप समूहमा विभाजित छ । कुनै पनि संगठन होस् वा व्यक्ति, उसले अंगीकार गरेको क्रियाकलाप र व्यवहार, विचार र तय गरेका बाटाले गन्तव्यसम्म पुग्छ कि खाल्डामा जाकिन्छ भन्ने कुराको फैसला गर्छ । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको समूहले गत असारअगाडि त्यो खाल्डो देखेको थियो भने मातृका यादव र नेकपा (माओवादी)ले साढे तीन वर्षअघि । �केहीलाई धेरै समय�धेरैलाई केही समय बेवकुफ बनाउन सकिन्छ तर सबैलाई सधै�का लागि सम्भव छैन� भन्ने सत्यकै आधारमा गुटको अवसान भएको छ । भृकुटीमण्डप कुम्भमेलामा राज्यका सुरक्षाकर्मीका खानतलासी पार गरेर खाली हात भित्रिएका कार्यकर्ताले दाहाल�बाबुरामका टाउकामा कुर्सी बजार्ने, गर्धन समात्ने र छाला काढ्नेसम्मको काम गरे । पुराना कार्यकर्ता हु�दाह�ुदै पनि हेडक्वार्टर सम्हालेका नेताहरूका हर्कत ६ वर्षअघि जिल्ला पार्टी सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत रह�दा अनुभूत भएको हो । फरक के थियो भने त्यतिखेर हामी �थाहा� पाउनेहरू थोरै थियौ� । �नेता कहा� बास बसेको छ�, �के खाएको�लाएको छ�, �कस्तो चाल�चलन, बानी�व्यवहार देखाउ�छ�, �कस्ताको संगत गर्छ�, �कस्तो विचार बोकेको छ� आदि कुरा विनाखोजीनीति जानकारी हुने ठाउ� परेछ त्यो सम्पर्क मञ्च । आफै�ले देखेका बाहेक �...आज फलानो तस्कर व्यापारीको घरमा, आज फलानो नवधनाढ्यकामा, आज म्यानपावरको बोसको घरमा, आज जग्गा दलाल साहुकामा, आज बोर्डिङ�प्लसटुको डाइरेक्टरकामा, आज एनजिओ�आइएनजिओका निर्देशककामा, आज फलानो भ्रष्ट ब्युरोक्र्याटकामा....� जस्ता जानकारी कसै न कसैले सुनाइहाल्ने । गोरखाका आदरणीय सहिद तथा बेपत्ताका परिवारको भेलामा आइदिनुप�यो भनेर हामीले पटक�पटक आग्रह ग�यौ� �समयाभाव� भन्दै टार्ने काम भयो । सायद क्रान्ति सम्पन्न हुन नसकेको त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म यी नेताको व्यस्तताले नभ्याएको एउटै संगठन �वेश्या (यौनकर्मी) तथा वेश्या दलाल मुक्तिमोर्चा� मात्रै बन्न बा�की भएकाले होला, अरू सबै खुले ।
त्यतिखेर तिनका कुकर्म मुस्किलले थाहा पाइन्थ्यो, अपराध कमै सार्वजनिक हुन्थे । अहिलेजस्तो शृंखलामा कैया�ै विषय सेलाउन नपाउ�दै अन्य कैयौ� प्रकट हु�दैनथे । दाहालको अर्थवाद र जा�ड�पानीे नलगाई निद्रा नपर्ने बानीजस्ता भ्रष्ट, पतित र विसर्जनमुखी व्यवहार, छोरा प्रकाशको पारस शाहको भन्दा निकृष्ट शैली, उद्दण्डता र यौन अराजकता, बाबुरामको राजनीतिक पाखण्ड र राष्ट्रघात, अन्य नेता तथा नेत्रीको सांस्कृतिक र आर्थिक विचलन�अपचलन र बिरप्पनपथीय व्यवहार र संस्कार आदि क्रियाकलापबाट वाक्क�दिक्क हु�दासमेत हामी �थाहा� पाएका कार्यकर्ताले तोकिएको मापदण्डभित्रबाट तौलिएर मात्रै बोल्न पाउ�थ्यौ� । जब बैठक वा कुराकानीका क्रममा यी विषयवस्तु कुनै कार्यकर्ताले उठाउ�थे� �झक्कु�अवतारका नया� आलोकहरूको निशानामा ती पर्थे । दाहाल�बाबुरामका यस्ता हर्कत र व्यवहारको विरोध गर्दा राजनीतिक जीवनमा त्यसअघि कहिल्यै नपरेको निलम्बन हामीले पनि भोग्यौ� । अपराध गर्दै हि�ड्ने पार्टीभित्रका रातो फेटा गुथेका �डा�का�हरू � राणाकालमा सोझो रूखलाई �सोझो छ� भन्दा दण्डित र कुण्ठित हुने प्रजाको नियति भोग्ने हामी कार्यकर्ता ! बडो गज्जबको थियो तत्कालीन माओवादी पार्टीको संगठन सञ्चालन विधि र जनवादको अभ्यास । अहिले भृकुटीमण्डपको मोर्चाबाट कमरेडहरूले तिनै हिसाब�किताब फस्र्याेट गरेझै� अनुभूत हुन्छ ।
कानुनी र व्यावहारिक मान्यताको त कुरै छाडिदिऊ�; पहु�चमा भएका र सत्तासीनहरूलाई पटक्कै नछुने अवस्थामा पनि कम्तीमा पारस शाहले अर्काकी श्रीमती उठाउने हिम्मत गरेका थिएनन् । अनैतिक र पतित घटना शृंखलाको पछिल्लो कडी दाहाल परिवारभित्रैबाट सार्वजनिक भयो । जनयुद्धका क्रममा बहुविवाह गरेकै कारण ज्यान गुमाएका उज्जनकुमार श्रेष्ठहरू मरेर गए पनि मार्न आदेश दिने बालकृष्ण ढुंगेलहरू, अन्य हजारौ� देख्ने, सुन्नेहरू र गोबर, गलामा डोरीले सुशोभित भई पशुले झैं बा�धिएर घास खादै जनकारबाहीमा परेका बहुविवाहकर्ता भुक्तभोगीकै सामुन्ने प्रकाश दाहालले अरूकी कसैकी श्रीमतीलाई तेस्री पत्नी तथा कमरेड पुष्पकमल तथा कमरेड सीता दाहालले तेस्री बुहारी बनाएर भि�याए । केही वर्षअघि मात्रै पार्टीकी कामरेड प्रभा बोगटीको पारिवारिक जीवन समाप्त पार्दै दाहालले तमुवान राज्यकी एक कन्यास�ग पुत्र प्रकाशको दोस्रो बिहे गराएका थिए । त्यतिखेर तमुवान राज्यकै राजधानी पोखराको एक पा�चतारे होटलमा पञ्चेबाजाको तालमा छमछमी नाच्दै दाहालले दोस्री बुहारी भि�याए । सिंगो संगठन र हामी स्वयं निरीह साक्षी बन्यौ�, कसैले मुख खोल्ने आ�ट गरेनौ� । ४ वर्ष पनि नबित्दै सिर्जना त्रिपाठीको वैवाहिक जीवन चकनाचुर हुनेगरी प्रकाश दाहालले भर्खरै सम्पन्न गरेको तेस्रो विवाह पिता पुष्पकमलको स्वीकृतिबेगर सम्भव देखि�दैन । पुष्पकमल आ�नो छोरा प्रकाशको तेस्रो विवाहका एकजना प्रमुख हस्ती हुन् । त्यसलाई पुष्टि गर्ने पहिलो आधार हो� पिता पुष्पकमल, आमा सीता, काका नारायण, दाइ समीर र अन्य नजिकका कोही�कसैको सहयोगविना त्यो स्तरको अपराध गर्नै नसक्ने प्रकाशको हैसियत । दोस्रो, पुष्पकमलहरूकै राज रहेको देशमा राष्ट्रपति जत्तिकै पावरफुल व्यक्तिको बुहारी बनेकी नवदुलही बीना मगरसहित अकुत सम्पत्तिको भारी लिएर छोरा प्रकाश दाहाल भाग्ने बाटो खुला पारिदिनु वा हरियो झन्डा देखाइदिनु । तेस्रो, भृकुटीमण्डपको मेलामा समूह बनाएर लुट्दै हि�ड्ने लुटेरा सावित भई दनक खाएको अवस्थामा देखाएकै जस्तो व्यवहार दोस्री बुहारी (सिर्जना) र सारा जगत्सामु देखाउ�दै छन् । दाहालको यो मलिन अनुहार केही दिनभित्रै छोराको नया�घरजमबाट हौसिएर प्रफुल्ल अनुहार र पुलकित व्यवहारमा बदलिएपछि तथ्य आफै� खुल्दै जानेछ । तर, तर्कशास्त्री र अनुमानकर्ताहरू मौन छन् । अपराधविद्ले �थाहा�पाइसकेका र सजिलै सावित गर्ने पुष्पकमलका ढोंगी र प्रायोजित आ�सु (गोहीको आ�सु) र मलिन अनुहारको रहस्यप्रति बेसरोकार रहनु डेढ करोड महिलामाथि अन्याय हो । मदन�आश्रित र राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश� दुवै नरसंहारका योजनाकर्ताको अभीष्ट र उद्देश्य समान थिए । तिनीहरूको पहिलो प्रमुख उद्देश्य नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका पहरेदारहरूलाई छानी�छानी सिध्याउनु र दोस्रो यी दुवैको ठाउ�मा आफै� वा आ�ना कठपुतलीलाई पु�याउनु । तर, गोत्रहत्या र मित्रहत्याका मतियारलाई ती ठाउ�मा त पु�याइयो तर टिक्न सफल भएनन्, सारा विश्वले अनुभूत गरेको सत्य हो यो । नेपाली समाजका स्वनामधन्यहरू अनौठा र अप्रासंगिक तर्क, अभिव्यक्ति, अवधारणा, अनुमान र निष्कर्ष निकाल्न अभ्यस्त छन् । १९ वर्षअघि मदन भण्डारीको रहस्यात्मक हत्या कसले ? किन ? र कुन उद्देश्यका लागि ग�यो ? यसबीच अनुमान र व्यक्तिपिच्छेका निष्कर्षको बाढी नै चल्यो । त्यो जघन्य हत्याको एक मात्र जिउ�दो साक्षी अमर लामालाई पनि मारियो । लामामार्फत कुन प्रयोजन हासिल गरेर कसले कहा� बसी सिध्याउने निर्देशन दियो ? अनुमान र निष्कर्षका खेतीपाती गर्नेहरू यता मौन छन् । लामालाई सिध्याउ�दासम्मका तथ्य आफै� बोल्छन् � जसलाई मदनको उचाइ र क्षमताप्रति ईष्र्या थियो, कुनै पनि नाम वा आवरणमा वर्गसंघर्षको लाइनबाट पलायन भएर जनताको बहुदलीय जनवादको बाटो हि�ड्नु थियो र भण्डारीको त्यो स्थान ग्रहण गर्नु थियो उसैले हत्या गराएको कुरा सुस्पष्ट छ । भण्डारीलाई सधै�का लागि पन्छाएर अन्ततः कसले त्यो बाटो समात्यो र स्थान ग्रहण गर्न तम्सि�दै छ ? सबैका अगाडि दिनको घामझै� छर्लंग छ । तर, त्यतातिर पीठ फर्काउने तर्कशास्त्री र निष्कर्षकर्ताहरूका लागि सत्य उद्घाटित भएको दिन पश्चात्ताप गर्ने समय बा�की नरहन पनि सक्छ ।
अध्यात्मवाद भन्छ ः कुकर्मको फल भोग्नैपर्छ; व्यवहारवाद भन्छ ः पाप धुरीबाट कराउ�छ; माथि उल्लेख भएझै� माक्र्सवाद भन्छ ः हरेक वस्तुको विकास वा विनाश त्यसको आ�नै आन्तरिक अन्तरविरोधबाटै हुन्छ । यी सार्वभौम सत्य दाहाल�बाबुरामको हकमा चाहि� लागू नहुने कुरै थिएन, अहिले त्यही भएको छ । यिनका चिन्तन प्रणाली, कुकर्म र व्यवहारले पतनशीलताको उत्कर्ष रूप देखिएको देखिएकै छ, पुष्टि भएको भयै छ र अहिले त्यो एकप्रकारले पराकाष्ठातिर पुगेको छ । भृकुटीमण्डप मेलाले लाहाछाप लाएर डामिसकेपछि� दाहाल बेइमान हुन्, भ्रष्ट हुन्, अनैतिक हुन्, धोकेबाज हुन्, आडम्बरी�ढोंगी�पाखण्डी हुन् आदि भनेर अब हामी कसैले उनको भण्डाफोर गरिरहनुपर्दैन । त्यसैगरी, विस्तारवादको असली कठपुतलीको भूमिकामा रहेका बाबुराम� जनविरोधी हुन्, परिवर्तनविरोधी हुन्, माक्र्सवादविरोधी हुन्, राष्ट्रघाती हुन् र सामान्य सुधारविरोधी पनि हुन् भन्ने कुरा उनको सरकारले ८ पटकसम्म बढाएको पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य उपभोग्यवस्तुमा गराएको चौतर्फी मूल्यवृद्धि, किसानको मल र बीउ नपाउ�दाको क्रन्दन, चित्कार तथा हाहाकार, सकुम्बासीको बिचल्ली, बाबुरामपत्नी हिसिला यमीमार्फत सञ्चालित भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र दलालीको साम्राज्य र पछिल्लोपटक राष्ट्रिय अस्मितालाई ठाडै विस्तारवादको जिम्मा लगाइदिने गरी भएको विमानस्थल हस्तान्तरण प्रकरण मात्रै पनि काफी छन् । त्यसैले, हामीले ६ वर्षअघि देखेको सत्य पतन र बदनामको सीमासम्म पुग्न दाहाल�बाबुराम स्वयंका चिन्तन, व्यवहार र नियतका शृंखला जिम्मेवार छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले रहस्यात्मक र दक्षिणपन्थी भासमा पुगेको कथित ठूला मान्छेका कुकर्म, धोखाधडी र पतन कुन हदसम्म हुन सक्नेरहेछ भनेर समाजशास्त्रीको दिमागमा तरंग ल्याइदिएको छ । ६ वर्षअघि आमजनताबाट फूल�माला र अबिर ग्रहण गरी जयजयकार खा�दै हि�डेकाहरू आज अपमान, तिरस्कार, आक्रोश, भत्र्सना र निशानाको वर्षे भेलमा पौडि�दै छन्, भविष्यमा पनि तिनीहरू पार लाग्ने कुनै गुञ्जायस छैन ।
जनयुद्धकालमा यस्ता दिन पनि आए, जतिबेला दाहाल�बाबुरामका हली, हुलाकीदेखि भरियासम्मको जिम्मेवारी यो पंक्तिकार र लाखौ� जनसमुदाय तथा युवाले निर्वाह गरेका थियौ� । यदि दाहाल�बाबुरामका विचार, व्यवहार र नियत ठीक हुन्थ्यो भने हामीले आजसम्म एक नया�, समृद्ध र स्वाधीन मुलुक पाइसकेका हुने थिया�ै । अत्यन्त दुःख, क्षोभ र पश्चात्तापसाथ भन्नुपर्छ� ठूलो बलिदान संघर्षपछि यस्तो मुलुकको नागरिक बन्ने अवसरबाट हामी र सम्पूर्ण नेपालीलाई विमुख पारियो । त्यसो नगरिएको भए आज आफूलाई �दाहाल�बाबुरामका हली�हुलाकी र भरिया पो बनिएछ� भनेर ग्लानि गर्दै �सुसाइड क्याडर बनेर तिनका अगाडि पड्किऊ��झै� लाग्ने थिएन, मुक्तियोद्धा थियौ��हौ� भनेर गर्वानुभूति हुने थियो । त्यसैले परिणाम दाहाल�बाबुरामले मात्रै होइन, जनयुद्धका क्रममा बलिदान गरेका हजारौ�का परिवारजन र हामी सबैले भोगिरहेका छौ� । भृकुटीमण्डपको निशाना त्यही चोट र पीडाबाट रन्थनिएकाहरूको स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो, नेपाली जनताले लामो समयसम्म हिसाब�किताबको खोजी जारी राख्नेछन् ।
(लेखक अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका संयोजक हुन्) प्राप्त प्रतिक्रियाहरु	(0) यसमा तपाईको प्रतिक्रिया	(रोमनबाट युनिकोड नेपालीमा लेख्नुहोस्) नाम